အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: အတိတ်ခရီးသို. ပြန်စောင်းငဲ့ ခြင်းဇာတ်သိမ်း
... 12:31:00 AM
ကိုမင်းအိမ်..စာတော့မဖတ်ရသေးဘူး.. comment အရင်ပေးတာ.. ဟီး..........
“ဒါမှ သာ နောက်ထပ် ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေက လကမ္ဘာမှာ အိမ်သွားဆောက်တဲ့အခါ အနည်းဆုံး လကမ္ဘာက ရေလေး တစ်ခွက်လောက်တော့ မျက်စဉ်းခပ်ဖို့ မှာ ကြရတာပေါ့ဗျာ“
ကို ရောက်တော့ ပြံးမိသွားတယ်၊ တင်စားတတ်တယ်၊ မျက်နှာသစ်ဖို့ မှာရင် များနေမှာမို့လား?
စဉ်းစားမိတာတွေတော့ တူတူပါပဲ၊ ကျမကတော့ ကံကောင်းခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်၊ တခြားလူတွေလဲ ဒီလိုပဲ ကံကောင်းပါစေ..
ကိုယ့်အရင် ဒီလမ်းကို လျှောက်သွားတဲ့သူတွေက ဘယ်နေရာမှာ ငုပ်ရှိတယ် ဘယ်မှာတော့ဖြင့် ချိုင့်ရှိတယ် ပြောပြနိုင်ခဲ့ရင် နောက်ကလိုက်လျှောက်ရတဲ့သူမှာ အခက်အခဲနည်းပြီး အောင်မြင်မှုကို မြန်မြန်ရနိုင်တယ် ဆိုတာ မှန်တယ်...
ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအရ ပြောရရင်တော့ ရှေ့က လျှောက်သွားတဲ့ လူတချို့မှာ အဲဒီ စိတ်ဓာတ်လေး လိုနေသေးတယ်...
နောက်လူကို တွဲခေါ်ဖို့ထက် တက်လာတဲ့သူက ငါ့ကို လာယှဉ်မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က ပိုကြီးစိုးနေမယ် ထင်တယ်...
27 July 2009 at 3:07 AM
အတိတ်ခရီးကို ပြန်စောင်းငဲ့ကြည့်တာတွေ ဇာတ်သိမ်းသွားပြီဆိုပေမယ့် အတွေးနက်နက်လေးလေးတွေ မပြီးသေးဘဲ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
27 July 2009 at 6:46 AM
အားလုံးထဲက မှတ်သားစရာတွေကို ကျွန်တော့် ရင်နှင့်အမျှမှတ်သားထားပါ့မယ်။
27 July 2009 at 9:27 AM
ပြီးဆုံးအောင် ဖတ်သွားပါကြောင်း ... :P
မှတ်သားစရာတွေလည်း မှတ်သားသွားပါကြောင်း ... :D နောက်ထပ်ပိုစ့်လည်း များများရေးနိုင်ပါစေကြောင်း ...
27 July 2009 at 10:13 AM
ကိုမင်းအိမ်ရေ... ကျွန်တော် MD က ကျွန်တော်ကို ဗဟုသုတလေးတစ်ခု မျှဝေပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ တစ်ခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး..။
အလွယ်ကူဆုံးပြောရရင် လမ်းညွှန်တာနဲ့ ယှဉ်ပြောကြရအောင်ဗျာ။ ခလုတ်ကသင်းများတဲ့ ခရီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုပါတော့ဗျာ...
ဘယ်သူ့လမ်းညွန်ချက်၊ သတိပေးချက်တွေကိုမှ မယူဘဲ၊ ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ရှာဖွေပြီးသွားမယ်ဆိုရင် အချိန်ပိုကုန်မယ်၊ အန္တရာယ်တွေ့ကြုံရမှု များမယ်။
သိတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဘယ်လိုသွားရမယ်၊ ဘယ်နားမှာ အန္တရာယ်ရှိလဲ အစရှိသည်ဖြင့် မေးမြန်းပြီး သွားရင် အချိန်ကုန်သက်သာမယ်၊ အန္တရာယ်ဖြစ်မှုရာခိုင်နှုန်းက Option 1 ထက်နည်းမယ်။
ဒါထက်ပိုကောင်းတာက သိတဲ့သူက ဘယ်လမ်းကနေပြီးသွားပါ၊ ဘယ်နေရာရောက်ရင်တော့ ဘယ်လို အန္တရာယ်ရှိပါလိမ့်မယ် ဆိုပြီး မြေပုံဆွဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Option2 ထက် ပိုပြီး အချိန်ကုန်သက်သာသွားမယ်၊ ပိုပြီး အန္တရာယ်ကင်းသွားမယ်။ (ကိုမင်းအိမ်ရောက်နေတဲ့ Option ပါ)
Last (or) Best Option
တကယ်လို့များ သွားခဲ့ပြီးတဲ့သူတွေ၊ သွားလာနေကြသူတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာသူတွေကများ လမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်တွေ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မဲ့နေရာတွေမှာ အချက်ပေးဆိုင်းဘုတ်တွေများ စိုက်ထူထားခဲ့မယ်ဆိုရင် တော့ တစ်ခြား Option တွေထက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲဆိုတာကို ကျွန်တော် MD က Leadership အကြောင်း သင်ပြရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ဖူးတယ်ဗျာ။
ဒါကြောင့် ကိုလူထွေးပြောသလို ဘယ်နေရာမှာ ငုတ်ရှိတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ချိုင့်ရှိတယ်လို့ ပြောမယ့် Option 2၊ ကိုမင်းကို ရောက်နေတဲ့ Option3တို့ထက် လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကို Best Option လိုမျိုးလေး ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေပေးနိုင်ရင် မကောင်းပေဘူးလားဗျာ။
27 July 2009 at 8:23 PM
ဒါနဲ့ စကားမစပ်ကိုမင်းအိမ်ရေ... သူချင်းဆိုတာ သီချင်းကို ပြောတာလို့ပဲ စကာပြေပြန်သွားပါတယ်ဗျာ။
27 July 2009 at 8:27 PM